Douglas Karr Kumda weRadiyo yeWebhu | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 7, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ubenexesha elimnandi nomhlobo u-Erin Sparks on Umda weWebhu unomathotholo (rhuma kwi iTunes) kulo Mgqibelo uphelileyo. Sixoxe ngezinye ze-infographics, i-facebook ihlawule iziphumo zophando, amaqhinga omxholo kunye nemidiya yoluntu. U-Erin kunye neqela lakhe bavelisa umboniso rhoqo ngeveki kwaye bahlala e-Indianapolis. Unako kwakhona mamela ngokuthe ngqo ngeWXNT iphepha lasekhaya.
Ukuba awukhange ufumane thuba lokumamela icandelo- nali inxenye yokuqala. Jonga amanye amacandelo ngo urhuma kwi-Edge yeWebhu yeChannel yeChannel.
tags: Umda wewebhuerin iintlantsiAmanani entengisounomathotholo
Ukufumana abantu bakho kwiziphumo zokuKhangela